काठमाडौं। चीनमा महामारी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस आतंकले अहिलेसम्म १०६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भनै हजारौं उक्त रोगबाट संक्रमित छन् ।
अहिलेसम्म यो भाइरसको सङ्क्रमण नेपाल, अमेरिका, जापान, थाइल्याण्ड, फ्रान्समा पनि देखिएको छ । कोरोना रोगबाट संक्रमित भएका बिरामीका लागि चीन सरकारले आपतकालीन छुट्टै हस्पिटल निर्माण गरेका छन् । तस्वीरमा देखिएको उक्त हस्पिटल चीनले बिहान उद्घाटन गरेर बेलुका निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका हुन।
यदि हाम्रो नेपालमा यस्तो हस्पिटल निर्माण गर्न लाग्यौं भने कति समय लाग्ला ? त्यो हामी सबैले कल्पना गर्न सक्छौं ! जनताको स्वास्थका निम्ति चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ्को निर्देशनमा उक्त हस्पिटल एक दिनमा निर्माण गरिएको हो। त्यसैले चीनलाई चमत्कारी देश भनेर पनि चिनिन्छ। यो पनि पढ्नुहोस: कोरोना भाइरस : १०६ जनाकाे ज्यान गयाे, चिनियाँ नयाँ वर्षकाे सार्वजनिक बिदा ३ दिन पछाडि सारियाे काठमाडौ।
चीनको हुबेई प्रान्तबाट फैलन सुरु भएको कोरोना भाइरसको कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १०६ पुगेको छ । निकै तीव्ररुपमा फैलिरहेको भाइरसका कारण तीन हजारभन्दा बढी व्यक्ति स’ङ्क्रमित भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । भाइरसको प्रकोपलाई रोक्न चीनियाँ नयाँ वर्षको सार्वजनिक बिदा पनि तीन दिन पछाडि सारिएको छ । हुबेईको वुहान शहरमा र अन्य शहरमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म हुबेई प्रान्तमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ५६ देखि ७६ को बीचमा रहेको छ भने चार जनाको अन्यत्रै मृ’त्यु भएको छ । चीनमा मात्रै कोरोना भाइरसको दुई हजार सात सयभन्दा बढी घटना सार्वजनिक भएका छन् ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार तीन सयभन्दा बढी गम्भी’र बिरामी छन् । ५० लाख बढी चिकित्सा कर्मचारी हुबेई प्रान्तमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सामेल भएका छन् । कम्तीमा दुई हजार शैय्या क्षमताको नयाँ दुई वटा अस्पताल बनाइँदै छ भने कारखानाहरु मास्क र सुरक्षात्मक कपडा बनाउनका लागि जुटेका छन्।
यसैबीच फ्रान्सका स्वास्थ्य मन्त्री एग्नेस बुजिनले चीन सरकारसँग भएको सम्झौतापछि यही हप्ताभित्र फ्रान्सेली नागरिकलाई हवाई जहाजको माध्यमबाट फ्रान्स ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । अहिलेसम्म यो भाइरसको सङ्क्रमण अमेरिका, जापान, थाइल्याण्ड, फ्रान्समा पनि देखिएको छ ।